किन चाहिन्छ चस्मा ? - ज्ञानविज्ञान
घाममा सनग्लास नलगाउनाले बेसल सेल कार्सिनोमा नामक समस्या हुन सक्छ । यो छालाको क्यान्सरको सबैभन्दा आम समस्या हो ।
आँखा घामको किरणसंग सम्पर्क आउँदा यस्तो हुन सक्छ । बेसल सेल कार्सिनोमा आँखाको परेलाको छालाको क्यान्सर हो ।
आँखाको तल्लो र माथिल्लो परेलाको बाहिरी पत्रलाई कन्जेक्टिभा भनिन्छ । यो आँखाको निकै संवेदनशिल भाग हो । जब यो सूर्यको किरणको सम्पर्कमा आउँछ, चिलाउन थाल्छ ।
यसलाई भाइरल, ब्याक्टेरियल वा एलर्जिक कन्जेक्टिभाइटिस पनि भनिन्छ । यसैले बाहिर निस्कदा सनग्लास लगाउन नभुल्नुहोला ।
Topics #किन चाहिन्छ चस्मा
Don't Miss it मिर्गौला रोगलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ ? तल पढ्नुहोस
Up Next अचारको सेवनले स्वाथ्यमा ल्याउछ यस्ता समस्याहरु
शिवरात्रि पूजा यसरी गरेमा सबै मनोकामना पुरा हुन्छ
भगवान शिबजी लाइ चमेली को फूल ले पूजा गरेमा बाहन सुख प्राप्ति हुन्छ शमी को पात ले भगवान शिबजी लाइ…